फेरी अस्ताए अर्का – बरिष्ठ मुटु रोग ‘विशेषज्ञ डाक्टर’ बिकास , स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो क्षति दया हुनेले मात्र rip लेख्नुहोस…
। आइतबार राति ११:५७ मा ४२ वर्षीय डा. सुवेदीको ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा नि’धन डा. सुवेदी सञ्चालक एवं निर्देशक रहेको कोटेश्वरस्थित गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कार्डियाक अस्पतालको व्यवस्थापन हेरिरहेका चिकित्सक डा. अमृत भुसालले उनको हिजो राति ११:५७ मा ह्याम्स अस्पतालमा नि’धन भएको पुष्टि गरे । हो ।डा. सुवेदीमा २५ दिनअघि कोभिड-१९ संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि उनको गौत
२०७८ भाद्र २५, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 591 Views